Imvelo yangaphandle yansuku zonke iyathinta kabi isikhumba sezinyawo zethu. Uhlale engaphansi kwengcindezi yesisindo somzimba, uhlushwa isikhathi eside eside egqoke izicathulo ezingathandeki, izicathulo eziqinile noma izicathulo ezinesithende. Ngenxa yalokho, isikhumba ezinyaweni ngesikhatsi siqala ukuhlambalaza, ukuhluma, amahlamvu, ama-hyperkeratoses (natto-pates) angakha.
Ukunakekelwa ngezandla, ubuso, indawo ye-decollete, njengombuso, sikhokha ukunakekelwa okwanele, kodwa ukunakekelwa kwemilenze, abaningi, ngeshwa, ukunganaki. Lokhu kusongela ukuthuthukiswa kwezinkinga ezingathí sina: ukuphahlazeka okubuhlungu kungavela, okuvame ukutheleleka, futhi umuntu uqala ukuzwa ukuzwa okuvuthayo nokungahambi kahle ngenkathi ehamba. Izenzakalo ezifanayo zingase zenzeke nasemadolweni, izintambo, ngezinye izikhathi ezintendeni zezandla. Ukuqeda izinkinga ezinjalo kungase kube salon beauty, lapho ochwepheshe bazohlinzeka ngezindlela eziningana ukuxazulula le nkinga, futhi eziningi zazo ziphumelela ngempela, kodwa, ngeshwa, hhayi ezishibhile. Namuhla kwakukhona ithuba lokukhipha isikhumba esibi futhi ekhaya. "U-Aquapilling" okhethekile wezinyawo kuzosiza kulokhu. Ukubuyekeza mayelana nalo mkhiqizo amakhasimende anelisekile ashiya okuhle kakhulu. Ake sikhulume ngakho ngokuningiliziwe kulesi sihloko.
"I-Aquapilin" yezinyawo iqukethe izinto zayo zokwenza izinto ezinciphisa isikhumba esinyama sikhumba, ama-antiseptics, ane-antifungal, i-antimicrobial effect. Umkhiqizo awuthinti izindawo ezinempilo zesikhumba. I-aquapillage yezinyawo iqukethe izinto ezifana ne-acrylate / palmet 25, i-tetraborate ye-sodium, i- acrylate i-copolymer, i-phosphorus c20-22 utshwala, i-potassium hydroxide, i-extract sage, i-aloe vera, i-menthol, amanzi.
"I-Aquapilin" ikhishwa ngesimo nesiphuzo. Esikhumbeni esikhanyisiwe kakhulu, ucingo olukhulu, i-keratosis, kunconywa ukuthi usebenzise kokubili izinhlobo zalesi sidakamizwa: kuqala isisombululo, bese ukhilimu. Isixazululo kufanele sisetshenziswe izikhathi ezingu-1-2 ngosuku. Ukhilimu ungasetshenziswa inani elingenamkhawulo izikhathi, ngoba izinto ezakhiwa ziphephile ngokuphelele. Lapho isakhiwo sesikhumba sezindawo eziphathwayo siphindela esimweni esijwayelekile, ukhilimu kuphela ongasetshenziswa ukugcina impilo yomlenze. Sebenzisa njalo uhlobo oluthile lwe-"Aquapilin" (isisombululo) sezinyawo akufanele kube, ngoba luqukethe i-antiseptic.
Ukusetshenziswa kwe "Aquapilig" kusho ukuthi izinyawo ziboniswa uma:
Egcwele isikhumba esinamazinyo, amadolo, izintende, izintambo;
Ama-calluses omile nama-corns;
Njengokuvimbela ekubunjweni kwesikhumba esinamafutha.
Futhi, i- "Aquapilling" ingasetshenziswa njenge-agent e-antitifungal ekwelapheni i- fungus emilenzeni. Ngokuvamile i-fungus ihambisana nekhanda elibi. Ukuze ukwelashwa kuphumelele kakhulu, kuqala udinga ukuqeda ungqimba okhulayo wesikhumba, bese usebenzisa ama-antifungal creams namafutha okugcoba.
"Aquapilling" ngezinyawo: imiyalelo yokusetshenziswa kwesisombululo
Musa ukugeza noma ukumanzisa izinyawo ngamanzi ngaphambi kokusetshenziswa. Inqubo kanje:
Ngezansi kubalulekile ukubeka ucezu lwefilimu ye-polyethylene, okuzokwazi ukugoqa inyawo. Phezulu ufake ithawula leshidi noma i-napkin, okuzodinga ukumboza isikhumba senkinga.
Nciphisa ithawula leshidi noma i-napkin ngesisombululo "se-Aquapilling".
Beka unyawo phezu kwe-napkin.
Ukumboza nge-plastic ingubo bese uyishiya kule ndawo imizuzu engu-15-20.
Ngemuva kwesikhathi esinqunyiwe, susa ifilimu nesinkwa.
I-scraper, efakwe kulesi kit, susa isikhumba esilula.
Geza unyawo ngamanzi afudumele ngaphandle kokusebenzisa insipho, ume kahle ngethawula.
Emva kokusebenzisa isixazululo ezinyaweni zakho, kutuswa ukuba usebenzise ukhilimu we-Aquapilling.
Izinzuzo ukhilimu "Aquapilling"
Ukulungiselela okunjalo kuqukethe i-urea, amafutha anemvelo (i-eucalyptus, i-mint, i-lavender), izitshalo ezitshaliwe (itiye eluhlaza, i-chamomile), okunikeza izinzuzo ezengeziwe zokwakheka kwe-Aquapiling:
Unomphumela wokulwa nokuvuvukala;
Iphuthumisa ukuphulukiswa kwemifantu;
Ayibangeli izinzwa ezibuhlungu noma ukuzwa okuvuthayo.
Isidakamizwa asithinti isikhumba esinempilo, ingozi yokutheleleka ayifakiwe, njengokuthi, uma usebenzisa i-pumice. Futhi ayikho ingozi yokusikeka, njengokwenziwe ngamathuluzi omshini, ukugaya amafayela e-nails, ama-scrapers abrasive.
Abathengi abasebenzisa ukhilimu, bhala iphuzu elilodwa elihle: "I-Aquapilining" (ukhilimu) inqatshelwe amafutha amaningi, ngokungafani nezinye izindlela zemilenze. Lokhu kutholakala ngenxa ye-predominance ekubunjweni kwe-abicah. Ngokusebenzisa njalo ukhilimu, kungenzeka ukuvimbela ukwakheka kwezindawo ezintsha zesikhumba ezomile, ezinamaqabunga nezinkukhu. Ngemva kwesonto lokusetshenziswa, izinyawo ziba nempilo futhi zibushelelezi.
Ukubuyekeza mayelana nethuluzi
I-Customer feedback on ukhilimu nesisombululo "I-Aquapilin" iningi lihle. Baqaphela lokho
Ngemuva kokusebenzisa ikhambi izithende zibe "njengengane" ngempela;
Ngesicelo esivamile sokhilimu, i-botulinum cishe ishiywe ngokuphelele ngosuku lweshumi lokusetshenziswa;
Ukhilimu awugcini nje ngokufudumala isikhumba esomile ezinyaweni, kodwa futhi kunomphumela wokudonshulwa;
Ngisho nangemva kokuphumula kolwandle, lapho amanzi okasawoti nesangweji unomthelela omubi esikhunjeni sezinyawo, ngosizo lwe "Aquapilling" ungabuyisa izithende ngesikhathi esifushane sokuthobeka nokubushelela;
"I-Aquapilling" iyindlela engcono kakhulu ekusetshenzisweni kwezinqubo ezibiza izindleko.
Indlela yokusebenzisa ukhilimu?
Njengoba sekushiwo ngenhla, leli fomu lomkhiqizo "u-Aquapilling" (ukhilimu) wemilenze isetshenziswe ngemuva kokusebenzisa isixazululo. Uma izinhlamvu zingabonakali ngokujulile, zingasetshenziswa ukunakekelwa njalo njengekhambi elizimele. Isidakamizwa "u-Aquapilling" siyancipha kakhulu futhi sinciphisa isikhumba sezinyawo.
Gwema ukuxhumana ngamehlo. Uma lokhu kungenakugwema, amehlo kufanele ahlanjululwe ngamanzi amaningi asebenzayo. Uhlelo oluphindaphindiwe lwesisombululo se- "Aquapilling" ngezinyawo, uma kunesidingo, sinconywa hhayi ngaphambi kosuku olulandelayo ngemuva kwenqubo yokuqala.
Namuhla ubuhle be-salon banikeza izinqubo ezehlukene zokusiza ukugcina ukubukeka okukhangayo. Nokho, iningi lazo libiza kakhulu. Ngenhlanhla, isayensi ayimi, futhi ukuthengiswa kwamahhala kuthola njalo izimali zokwenza kahle umzimba wakho ngaphandle kokushiya ekhaya. Omunye wabo umuthi "Aquapilling". Ngalo, imilenze yakho nezinye izindawo zomzimba ezidinga ukunakekelwa okwandisiwe kuzohlale zihlelekile. Ngokwemvelo, ukubaluleka kubalulekile lapha, ngoba noma iyiphi inkinga ihlale ilula ukuvimbela kunokuqeda isikhathi eside. Zizinakekele ngenjabulo, futhi umphumela ngeke ugcine ulinde. Yiba mnandi!
Umugqa entsha "100% umbala ivolumu" - Lipstick "Faberlic". Kwemikhiqizo